Momba anay - Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
Ny sandan'ny anjara Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
Manana ny za-draharaha skid-nitaingina ekipa teknolojia ny entona voajanahary fitaovana tany Shina. Manana mpiasa R&D mihoatra ny 40 izahay. Tamin'ny volana jona 2020, nahazo patanty 41 izahay, anisan'izany ny patanty famoronana 6.
Manana tanjaky ny fanamboarana skid matanjaka sy toeram-pitsapana feno izahay, atrikasa 200.000 m² ho an'ny fanamboarana fitaovana sy fanamboarana sambo. Ankoatra izany, manana efitrano sandblasting manokana lehibe izahay, efitrano fandokoana, lafaoro fitsaboana hafanana; 13 vano lehibe sy salantsalany, miaraka amin'ny fahafaha-miakatra ambony indrindra 75 taonina.
Miorina amin'ny efitrano fitsirihana lesoka manokana, dia afaka manao UT (ultrasonic), RT (Ray), PT (fidirana) ary MT (vovoka andriamby) lesoka; ary miaraka amin'ny tobim-panadinana fanerena andrana matihanina vita amin'ny finday FAT mandeha ho azy, afaka mamoaka tatitra ara-panadinana marina sy haingana izahay.
• Fitaovam-pitaterana menaka tsy misy dikany
• Fitaovana fitsaboana amin'ny loha-drano
• Fitaovam-pitaterana entona voajanahary
• Vondrona fanarenana ny hydrocarbon maivana
• Ozinina LNG
• Compresseur gasy
• mpamokatra entona voajanahary
Nahazo ny fahazoan-dàlana famolavolana sy fanamboarana sambo nasionaly A2 izahay, ny fametrahana fitaovana manokana GB1, GC1 kilasy, ny fanovana ary ny fahazoan-dàlana fikojakojana, ary ny fahazoan-dàlana amerikana ASME, hajia U&U2. Izy io dia afaka manatanteraka ny famolavolana sy ny orinasa mpanamboatra sambo fanerena isan-karazany, pipelines fanerena sy ny singa fanerena.
Nametraka rafitra hentitra momba ny kalitao, ny tontolo iainana ary ny fahasalamana sy ny fiarovana ny asa izahay ary nahazo mari-pankasitrahana ISO9001: 2015 rafitra fitantanana kalitao, ISO14001: 2015 fanamarinana rafitra fitantanana ny tontolo iainana, GB / T28001-2011 fanamarinana rafitra fitantanana ny fahasalamana sy ny fiarovana. Ankoatr'izay, nahazo ny mari-pankasitrahana "Shina Honored Brand for Excellent Quality and Assured Service" nomen'ny China Association for Quality Inspection, ary ny vokatray dia nahazo ny anaram-boninahitra hoe "Marika malaza Sichuan" nandritra ny enina nisesy.
Miorina amin'ny fanamafisana ny tsena anatiny, ny vokatra sy ny serivisy dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny folo any Azia, Eoropa ary Afrika, manome ny mpanjifa amin'ny serivisy avo lenta, mahomby ary mahafa-po.
Nanolo-tena ho mpitarika ny indostrian'ny fitaovana angovo madio ao Shina izahay!
Famolavolana, fanoloran-tena, pragmatisma ary fanavaozana
Ny fahatsorana sy ny firindrana, ny fahamarinan-toetra sy ny tsy fivadihana, ny tsy fivadihana sy ny fitiavana, dia mandresy mandrakizay.
Mba ho mpamokatra voalohany amin'ny indostrian'ny solika sy entona any Shina.
Serivisy mialoha ny fivarotana
Manome vahaolana mifaninana izahay aorian'ny fahatakarana ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Manome kojakoja sy boky fampandehanana izahay, ary mitari-dalana ny mpanjifa hametraka sy hanao komisiona eny an-toerana. Raha misy olana amin'ny fizotran'ny fampiasana, dia hanome torolàlana amin'ny horonan-tsary izahay ary hiatrika azy ireo rehefa ilaina izany.